Ntuziaka SRAM ọ dị mma? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Ntuzi nduzi - azịza ohuru
Ntuzi nduzi - azịza ohuru
Ntuziaka SRAM ọ dị mma?
Otu nkeSRAM Ntuziaka brekO siri ike itimagburu onwearụ ọrụ nzọ ụkwụ na ndụ dị mfe, manaNduziRSCs dị oke egwu ma ọ bụrụ na ị nwere ike imeli ha. Isi arụmọrụ bara uru naNduziRSbrekịndị ibu-ezigbo-eji ire ụtọ katrij menjuobi.Ọnwa Ise 28, 2017
(Hiss) (igwe egwu) - Ugbu a, ndị na-agba ugwu ugwu niile kwesịrị ịgba ọbara brek site n'oge ruo n'oge na n'isiokwu a, anyị ga-eleba anya na-agba ọbara SRAM na -achakarị na nke kachasị ọhụrụ n'iji ọdụ ụgbọ mmiri na-agba ọbara. Ọdụ mmiri na-agba ọbara bụ ihe okike ọhụrụ sitere na SRAM nke mere ka ọbara ọgbụgba dịtụ mfe ma nwee obere ọgbụgba. Ugbu a ọ bụrụ na ịnweghị n'aka ma ọ bụrụ na breeki gị nwere ọdụ ụgbọ mmiri ọhụrụ a maọbụ ọ bụrụ na ọ bụ usoro ochie, ọ bụrụ na ịlele ngebichi ugbu a, aka ekpe bụ usoro ochie yana aka nri bụ sistemụ ọhụụ nke njikọ njikọ ọbara ọgbụgba.
Enwere ike ịchọta usoro ihe ọhụrụ a na brakes wuru na 2015 na mgbe e mesịrị, mana ọ bụghị na ụdị ọ bụla, ndị a bụ ngwaọrụ ịchọrọ maka ọrụ a. Yabụ na mbido ịchọrọ ihe ọgbụgba ọbara kwesịrị ekwesị maka brek gị. Yabụ enwere SRAM na Aku brek, ị chọrọ ụdị ọbara ọgbụgba ahụ, ma ọ bụrụ na ịchọghị ịnweta SRAM zuru ezu Epic Bleed Solutions na-emekwa Bleed-K iji kwado ya, ọ bụ ezie na anwabeghị m ya anaghi m agwa gi etu o si di nma.
Ugbu a ị ga-achọ ihe ole na ole ndị ọzọ gbasara ihe nkwụnye ọkụ na-agba ọbara. Ya mere, nke a bụ ihe nkwụnye nkịtị nke na-eji aka ekpe aka ekpe nke m gosipụtara gị na mmalite nke isiokwu ahụ. Ọ dị mma na nke a bụ ihe ọhụụ ọhụụ ọhụụ na-agbazi ma akụrụngwa ahụ n'onwe ya na-emeghe ma mechie ọdụ ụgbọ mmiri a ka e wee belata nchapu niile yana ohere ikuku ịlaghachi na breeki ahụ.
N'ezie dị mfe ngwa ngwa. Enwere naanị otu nkwụnye, yabụ ọ bụrụ na ịnwee SRAM ma ọ bụ Avid Bleed Kit, ihe niile ị ga - eme bụ ịnweta akụkụ ahụ iji mezue usoro ahụ. Ga-achọ ihe mgbochi dị iche iche nke ga-adaba na piston caliper gị iche iji mee ka ha nọrọ ebe ị na-agbapụta ha.
Next ị chọrọ kwekọrọ ekwekọ Torx igodo. Na nke a ọ bụ T10 na T25. Ma n'ezie igodo Allen dabara gị igwe kwụ otu ebe.
N'okwu m, Achọrọ m igodo Allen milimita isii iji wepu ụkwụ azụ, ikekwe ị gaghị achọ otu na nke gị ma ọlị. Ikwesiri ise, anọ, na abụọ na 1/2. Ga-achọkwa mmiri mmiri DOT pụrụ iche.
Dị ka o kwesịrị, m ga-asị nweta onwe gị mmiri ọhụụ n'ihi na ka oge na-aga, ihe ndị a nwere ike ịmịkọrọ mmiri mmiri, nke ga-emetụta arụmọrụ nke brek gị ma ọ pụtara na ị ga-eme usoro a ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ọ dị ọhụrụ. Ọ bụrụ na ọ bụghị, dị nnọọ ijide n'aka na ọ bụghị urukpuru ma ọ bụ anya mmeru n'ụzọ ọ bụla.
Ma ugbu a, m ga-akwado ụfọdụ ezigbo gloves nitrile roba gloves iji kpuchido aka gị dịka mmiri DOT na-emebi emebi. M ji obi ụtọ na-atụ aro ka ndị mmadụ jiri ezigbo agịga-imi ihe mkpuchi wepu obere akwụkwọ ntachi obi na nkedo njigide na-agafe na mpe mpe akwa. Ọ dịchaghị mkpa, ịnwere ike iji aka aka gị wepụ ya, b mana ọ na-eme ka ọ dị mfe karị na obere obere fiddly.
N'ikpeazụ, ị ga-achọ akwa nhicha ma ọ bụ akwa dị ọcha iji jide n'aka na ị nwere ike ihichapụ igwe kwụ otu ebe na n'ezie itinye akụkụ ahụ na bench. Na ụfọdụ diski breeki Cleaner dịkwa mma, nke mere na akụkụ niile nke breeki gị enweghị ihe fọdụrụ nke nwere ike ịchacha agba ahụ igwe kwụ otu ebe. Yabụ ihe mbụ ị ga - eme bụ ime ntakịrị nkwadebe caliper.
ofu akwa uwe
N'ezie, ị ga-ewepụ ụkwụ n'azụ igwe kwụ otu ebe na ụzọ m N'aka nke m ọ bụ ọnya isii nke hex milimita, yabụ gbaa mbọ hụ na azụ azụ azụ akpọchirila ma kwadebere ka ị dobe ya. Ugbu a ọ dị ezigbo mkpa na ị Jide n'aka na ị ga-esi n'azụ ụkwụ gị na-ebute Bringweta mpaghara ahụ dị ize ndụ, na ihe m na-ekwu site na nke ahụ, na-ejide n'aka na ọ nweghị mmanụ breeki nwere ike ịbịaru rotor diski azụ n'ihi na ọ nwere mmetọ bụ nọmba otu ihe ị na-eme chọrọ brek. Kpamkpam emetụta arụmọrụ na ị ga-amalite ọzọ.
Ọzọ na-abịa agịga-imi pliers na jiri nlezianya dị nnọọ wepụ obere clip ebe a. Chọghị ka ọ gafee ụlọ ahịa ahụ. Ka a pụọ.
Dịkwa ka ọrụ ọ bụla, gbaa mbọ hụ na i wepụrụ mpekere niile ma tinye ha n'usoro ị ga-echeta mgbe ị chịkọtara ihe. N'okwu a, m ga-etinye nke a na bench ebe a n'ihi na m na-etinye pad iche. Ọ bụ igodo Allen dị milimita abụọ na ọkara iji wepu njigide njigide.
Naanị kpughee nke a site na caliper, slide nke na-apụ apụ, ma oge eruola iwepu pad ahụ. Ugbu a nke a bụ mpempe dị ezigbo mkpa. Ọ bụrụ na aka gị ruru unyi, gbaa mbọ hụ na ha anaghị eru nso n’elu breeki breeki ahụ.
O doro anya na ịchọrọ ijide n'aka na pad ndị a dị nchebe ma chebe ya pụọ ​​na mmetọ. N'okwu a, a bụ m ya mere m ga-etinye ha na obere akwa ebe a. Kechie nke ahụ ma debe ha ebe a na-arụ ọrụ mgbe e mesịrị ka m mara na echekwara ha.
Ihe ikpeazu i gha eme iji bulie caliper gi bu slide bloody block na ebe o nwere otu obere oghere na-agbafe na ya ka i wee nwee ike ijide ya na ebe ichoghari ya iji jide n’aka na o nweghi ebe obula na otu ị mere nke a na brek na-eche nnọọ zuru okè. Ka a pụọ. Nzọụkwụ ọzọ bụ ịkwadebe sirinji iji mee ihe, ya mere, nke a bụ ebe uwe roba na-abata.
Ya mere, m kwadoro ka ị jiri ha. Ọtụtụ mmadụ na-eme ya na-enweghị ya, na ikpe mara m nke na anaghị m etinye aka aka ọtụtụ oge n'ihi na enwere m mmasị etu ihe si eche, mana m ga-eji ha oge ọ bụla m na-egwuri egwu na ihe na-emebi emebi, ọkachasị mmiri mmiri DOT. Ọ dị njọ imetụ aka gị n’ihe.
Sirinji mbụ ị ga - achọ jupụta na mmiri mmiri bụ nke na - abanye n’ime lever n’elu igwe kwụ otu ebe. Nke a bụ nke nwere ụdị ejiji ochie na njedebe ebe ahụ, ịchọrọ ịjuju ihe dịka ụzọ abụọ n'ụzọ atọ zuru ezu, nke na-esote bụ nke dị na e nwere ihe nkwụnye ọnụ ụzọ m na-etinye ebe a maka iji ugbu a. Ugbu a, ịchọrọ obere mmiri mmiri.
A ga-enwerịrị mmiri mmiri n'ime ya dịka ọ na-etinye na caliper ahụ n'onwe ya, ị chọghị ohere maka ikuku ịbanye na caliper, mana ị na-agbapụta site na njedebe nke lever n'ụzọ niile ruo na njedebe a maka ya ka ewepu ya ebe a. Obere ohere dị ka ihe niile ga - esi nweta bụ ihe ị na - achọ. Mgbe idejupụtara ya ugbu a, gbaa mbọ hụ na ikuku ikuku adịghị n’ime ya.
Ya mere, ị na-ewere mmanụ ahụ ozugbo site na akpa ahụ, mgbe ahụ ị ga-ahụrịrị na ikuku ikuku adịghị ebe ahụ. Thezọ isi mee nke a bụ iji nlezianya dozie ya ma debe akwa na njedebe. Chọghị ịga ebe ọ bụla, ọkachasị anya gị.
Naanị ị chọrọ ịmịcha sistemụ ahụ ka ị nwee ike tufuo ikuku dị ebe ahụ. Ya mere ị pụrụ ịhụ na ọ na-arịgo site na tub e. Tinyegharịa otu usoro ahụ na nke ahụ na nsọtụ ọbara ọgbụgba.
Ọzọkwa, ị chọrọ naanị ntakịrị ntakịrị mmiri mmiri ebe a. Anyị agaba. Ugbu a sirinji dị njikere maka ojiji.
Chefuo, tinye uwe aka gị, jide n'aka na ị ga-enwe akwa towel Ragor Shop zuru oke iji hichapụ ihe ọ wụfuru na n'ezie, ọ bụrụ na ọ bịaruru nso na etiti gị, aka gị ma ọ bụ ihe yiri ya, hapụ ya ka ọ hichaa ma jiri ụdị ụdị a diski breeki na-ehicha ma ọ bụ mmanya isopropyl ozugbo o kwere omume ka ọ ghara imebi ọrụ agba gị. Odi mma bido ebe a na njedebe aka mbu. Na-arụ ọrụ a n'onwe gị ma ọ bụrụ na ị nwere naanị lever horizontally n'ihi ya, ọ na-akawanye obere obere imetosi na n'ihi na ị na-arụ ọrụ site na azụ na n'ihu nke igwe kwụ otu ebe n'otu oge ọ dị mfe iji ya mere, na T25, dị nnọọ iha aha gị brek ntakịrị.
Ọ bụrụ na igwe kwụ otu ebe gị nwere ọnọdụ kọntaktị, ọ bụ obere ọkpụkpọ n'ihu ebe a, nke a anaghị eme ka ọ ghara imeghe ya na ntụgharị nke akụ ebe ahụ ruo mgbe ọ kwụsịrị. Ọzọkwa, ịchọrọ ijide n'aka na mbubata ogwe aka ahụ dịkwa n'etiti 75 na 80 millimeters na njedebe nke lever ahụ n'etiti etiti ahụ. Na-esote, ịchọrọ inweta T10 ma wepu windo ahụ n'elu.
Ugbu a kpachara anya mgbe ị na-ewepụ ihe ndị a n'ihi na ị chọghị ịkpaghasị igwe kwụ otu ebe. Nwere ike ida ntakịrị mmiri mmiri si ebe a, dị njikere ma hichapụ oke ọ bụla na - apụta. Ọzọ, ọ bụ oge itinye sirinji n'ime njedebe menjuobi.
Ugbu a ihe niile ị ga - eme bụ ijide n'aka na obere ncha uhie na - agbachi ebe a n'ihi na ị chọghị mmanụ ka ị banye ebe ahụ, ị ​​na - emechi usoro ahụ na ya. Gbaa mbọ hụ na ọ dị mma ma kwụ ọtọ ma jikọta ya nke ọma. Naanị m ga-ehichapụ oge a ọzọ iji belata mmịpụ ahụ.
ịnyịnya ígwè na-esure abụba
Obere obere ihe m chọrọ iji mee ihe bụ akwa mpempe akwụkwọ ma ọ bụ akwa n'okpuru mpempe akwụkwọ na gburugburu ya ka ọ bụrụ na m na-arụ ọrụ na ya ọ nwere ike ijide ihe ọ bụla ọ pụtakwara na enwere m nnweta dị mfe, ịkwụsị ya n'ebe ọ bụla. Ugbu a ọ dị mkpa iburu n'uche na ndị levers ahụ doro anya na ihu ihu ihu igwe gị. Ọ bụrụ na ị chere na enwere nsogbu nke ụmụ irighiri mmanụ na-abịaru nso diski diski gị, wepu ụkwụ ihu gị na igwe kwụ otu ebe ma hụ na edobere ya na ebe nchekwa ka e wee chekwaa rotor rotor site na mmanụ na-agbapụta weta ngwongwo na-agba ọbara. caliper.
Ya mere, ka anyị mee nke ahụ. Nke mbu, ichoro iwepu obere roba ala n’ebe ahu. Ma debe ya.
Ihe na-esote bụ isi anọ nke millimita hex na ebe a. Ugbu a ihe niile ịchọrọ ime bụ ịtọpụ nke ahụ wee pịaghachi ya azụ, mana jikọta ya n'ụzọ nkịtị. Mbepụ mmanụ nwere ike ịpụpụ caliper mgbe ị na-eme nke a.
Echegbula onwe gị banyere nke ahụ. Nwere ike ihichapụ ya. Anyị doro anya na anyị ga-agbanyekwu mmanụ site n'ụzọ a bụ naanị iji jide n'aka na ọ dị njikere iburu ngwá ọrụ ahụ.
Aga m ewebata ya ebe ahụ. N'ebe ahụ ị na-aga, na-atọpụ ya, mgbe ahụ pịa ya nke ọma. Ọ pụtara na nrụgide gị adịghị na ngwá ọrụ iji gbanwee isi ahụ na-esote, ị ga - achọ ijide ngwá ọrụ na - agba ọbara, slide ya n'ime caliper, ma pịa ike, ị ga - ahụ na ọ na - eme ụdị ụda pịa na pịa na ebe ahụ, ị ​​chọrọ imeghe usoro.
Yabụ ịchọrọ ịgbanwe otu ntụgharị a. Agala ihe karịrị isi abụọ n'ihi na ihe ahụ ga - apụta ma mmanụ niile ga - apụta ma ị ga - eme nke a site na isi. Ya mere buru n’uche na mgbe ị mepere ya, onweghị mmanụ ga-esi na ya pụta dị ka ihe mgbochi menye ọnụ ga - eme ka mmanụ ghara ịbanye na nsọtụ lever.
Mana mee ya nke oma ma ị di njikere ibido usoro mbu. Iji malite usoro ntinye, gaa na njedebe nke lever ahụ ma ị ga-atọghe mpempe mpempe akwụkwọ ahụ ị chọghị ịmalite ịkwatu ihe ahụ. Emela ngwa ngwa.
Chọrọ ime nke a dị mma ma jiri nwayọ na-enye ikuku egosipụta na irighiri ihe na sistemụ oge ịwagharị. Ugbu a, ebe a ịchọrọ ịnọ na njedebe caliper maka ikuku ikuku na ihe ndị ọzọ na-apụ apụ. Ugbu a jide n'aka na ị nwere mmiri zuru oke na njedebe nke lever iji kpoo usoro ahụ dum.
Ya mere, lekwasị anya na ịchapu mmiri mmiri na-asọpụta. Ọ bụrụ na ọ dị njọ, ọbụlagodi oji, ihe dị ka nke ahụ, ịnwere ike ịmeghachi ya na sirinji ọzọ nke mmiri mmiri naanị iji jide n'aka na usoro ahụ nwere oke zuru oke nke ihe dị mma, nke ọhụrụ, dị ọcha, nke na-enweghị mmetọ. Ugbu a megharịa piakota ruo mgbe enweghi ikuku ikuku.
Ikwesighi iri ara maka na emechaghi emecha ya, hu na otutu n’ime ya di nma. Jide sirinji caliper ahụ n’aka nri gị n’aka nri aka ekpe gị n’aka ekpe gị, dị nnọọ dọpụta sirinji menjuobi ahụ, ị ​​ga-achọ ikuku egosipụta yu m na-aga elu, dị ka nwatakịrị ahụ n’ebe ahụ. Ole na ole microscopic, ma ọ dị mma, echere m.
Ọ bụ ezigbo usoro doro anya. Ma ọ bụghị ya, ọ dịghị ihe ọ bụla na-ebugharị. Ọ dị mma, njedebe nke lever ahụ akwụsịla ikuku ikuku ka ọ dị ugbu a ọ bụ oge iji mechie ya na njedebe caliper na nke ahụ pụtara na usoro ahụ emechila ma sirinji ahụ ka dị, mana nke ahụ nwere ike ịnọ ebe ahụ maka oge ahụ.
Ugbu a, ka anyị gaa na njedebe nke lever ebe ịchọrọ ịmị ọbara ọbara ahụ, ọ bụkwa maka itinye nrụgide na sistemụ ahụ. Ya mere ọ bụrụ na ihe niile ka mepere na njedebe ahụ, echefula na ọ na-emechi na njedebe caliper, dọpụta lever na ma hapụ ya oge ole na ole, ma ịchọrọ ịkwanye ya n'ime ebe ahụ wee banye otu di na nwunye oge dọpụta ya ọzọ, gbaa mbọ hụ na ikuku anaghị esi na lever n'onwe ya pụta, yabụ otu ihe na-adọta sirinji ahụ wee weghachite ike iji tinye sistemu ahụ na nrụgide, ma ugbu a ọ bụ oge iji kpochie sirinji ahụ ebe anyị nwere ike ịmalite iwepụ. Ugbu a bụ oge iji wepu sirinji na menjuobi.
Ugbu a jiri nlezianya dozie ya. Gbaa mbọ hụ ọzọ na mwekota nke sooks bụ n'ebe ahụ, ma ọ bụghị mmiri mmiri ga-aga site na ya. Ka ị na-eme nke a, agụ ahụ ga-ehi ntakịrị.
Ya mere, gbalịa ihichapụ ihe ọ bụla i nwere n’ebe ahụ. Ka a pụọ. Ọ tụrụ aro ka a mee ka ihe nkedo ahụ sikwuo mita 1.5 ruo 1.7 Newton.
Aga m elele na obere oge, Achọrọ m ijide n'aka na ọ dị ọcha ma nwee mmetọ. (Cleaner sprays) Diski breeki Cleaner adabara maka nke a, ka ọ na-ada. Ọ bụ ihe mgbaze kpọrọ nkụ.
I nwekwara ike iji onye na-ehichapụ kọntaktị ma ọ bụ mmanya isopropyl. Ikwunye buut laghachi. Obi dị m ụtọ na nke ahụ.
N'ihi ya, m na-atụgharị m breeki lever ka mmasị n'akuku, nke bụ ezigbo ala a akpan akpan ọnọdụ. Ugbu a ọ bụ oge iji mechie usoro azụ ma hụ na caliper dị ọcha na enweghị iberibe tupu etinye breeki breeki azụ na e. Ya mere, ugbu a, ka e ji mechie igwe kwụ otu ebe nke igwe kwụ otu ebe, megharịa otu usoro dị n'okpuru.
Nzọụkwụ mbụ bụ iwepu ngwá ọrụ ọgbụgba. Ọ na-apụta na ị ga-ahụ na mmanụ adịghị apụta n’ihi na ọ dị mma, mara mma mara mma. Na-esote, ị ga-ejide ihe nkedo milimita anọ dị n'okpuru.
Naanị jide n'aka na T10 nọdụrụ ebe ahụ. Yabụ, ịchọrọ ịdebe nke ahụ, mgbe ahụ, usoro ọzọ bụ iji jide n'aka na enweghị mmiri mmiri ebe ahụ. Nke ahụ dị mma.
Ma mgbe ahụ dị dochie plọg roba ma oge eruola iwepụ ngọngọ ọgbụgba ahụ. Naanị hichapụ caliper n'ihi na mgbe ụfọdụ mgbe mmanụ na-agbapụta, ọ bụ naanị n'otu ebe ebe mpempe akwụkwọ ga-emesịa. Mgbe ahụ, ị ​​ga-edochi pad ahụ, weghachite ntụtụ ahụ ma tinye mgbanaka ahụ.
Ya mere, ka anyị gawa. Ọ dị mfe iji sistemụ ọdụ ụgbọ mmiri na-agba ọbara na sistemụ SRAM y dị mfe, dị mma ma dịkwa mfe maka onye ọ bụla ịbara ọbara n'ụlọ. Ugbu a, site na mmiri mmiri fọdụrụnụ nke ị nwere, ihe dị ọcha, ị nwere ike ịchọrọ akara nke a dị ka ejighi ya ka i wee nwee ike idobe ya iche na shelf gị na mmiri ochie ọ bụla, ana m akwado ka ị gụgharịgharịa ma tụfuo ya nke ọma.
Ya mere, ị ga-etinye ha n'ime akpa ọzọ. Jide n'aka na ọ dịpụrụ adịpụ site na isi mmalite nri ma ọ bụghị naanị itinye ya n'okporo mmiri n'ihi na ihe a adịghị mma maka gburugburu ebe obibi. Yabụ, maka isiokwu ole na ole bara uru, ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọpụta otu esi eme mmụba hip, ọ nweghị ihe ọ bụla, mana ọ bụ ezigbo akụkọ dị mma na Blake na-agba ya na ụfọdụ nnukwu jumps, pịa ebe a na mgbe ị nwere nhọrọ 10 Iji mee ka ọ dị ọhụrụ gị igwe kwụ otu ebe, ọ bụ n'ezie a free isiokwu, ọ bụ ihe niile banyere ezi uche ihe banyere ịnọgide na-enwe gị igwe kwụ otu ebe na-eme ihe kasị nke gị igwe kwụ otu ebe maka afọ, pịa ebe a n'okpuru.
Dị ka mgbe niile, pịa ụwa ka ịdenye aha. Anyị nwere ọdịnaya ọhụrụ maka gị kwa izu, ma ọ bụrụ na ịchọrọ isiokwu ahụ ma ọ bụ na ọ nyere aka, nye anyị mkpịsị aka aka.
Ndi SRAM ndu t brek 4 pistin?
NaSRAM Nduzi Tbụ, ị chepụtara ya, hydraulic anọpistinnzọ ụkwụ na ugwu niilebreeki. Caliper na-abịa site na mpempe akwụkwọ na-akwado ígwè, agụba agụba bụ aluminom zoro ezo, na menjuobi ahu arapara naNke Sram'skpochapụwo nkedo mwekota, dakọtara na kpochapụwo Matchmaker. Nov.
Ndi koodu SRAM na ndu nkpuchi breeki bu otu?
6 + na ngwaahịa Ngwaọrụ mbụmpe mpe akwamaka enweghị nkwekọrịtadiski breekiarụmọrụ. Ndị ampe mpe akwadakọtara na nke ọhụrụ 2018 +SRAM Code breknaSRAM NduziREBreekiCalipers. Jiri naanị Organicmpe mpe akwaọ bụrụ n'ịchọrọ ịme nke gịbrekịdị jụụ, mana ịtụ anya obere ikebrakingike.
SRAM agbaji agbagha?
Nye ya ogbugba! Onye obula nwere ihe omuma nke igwe nwere ike gbanwee habrekị.IhereMTBbrekịdị mfe - wepụ ihe mgbochi mmanya ma tụgharịa ha.Ọgọst 13 2020
Mgbe ụfọdụ ịkwesịrị iji dochie hokes breeki gị. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi na ị nwere mgbazinye mgbazinye ma ha bụ ụzọ na-ezighi ezi maka gị. Ma ọ bụ na ị zụtara igwe ire ere, ọ na-abịa ozugbo na igbe kaadiboodu, otu ihe ị ga-ebu n'uche, agbanyeghị, ọ bụrụ na ị maghị banyere hydraulics, gbaa mbọ hụ na ị na-enyocha ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe.
Otú ọ dị, nke a bụ usoro dị mfe ma anyị ga-eji breeki Shimano gafere gị taa. N'isiokwu a, anyị na-eleba anya na Shimano brekị na ọ bụ n'ihi na Shimano ziri ezi na aka ekpe. N'adịghị ka Sram ma ọ bụ Avid brek, anyị nwere ike iwepu mpempe mpempe akwụkwọ ma gbanwee niile nke levers.
Na Shimano brekị, ọ na-arụ ọrụ na mmiri ịnweta; mmiri a anaghị emebi emebi ma ọ bụ na-emerụ ahụ, mana ị ga-eyi nchedo anya ma ọ bụrụ na ịnweta splashes ma tinye gloves roba. Nke a bụ usoro dị mfe ma dịkwa mfe, ọ bụrụ na ị na-agbanwe hoses gị, ị ga-akpachara anya na ya, ịkwesighi ịzọ ụkwụ na brekị, mana ọ bụrụ na ị ga-awụfu mmanụ, ị nwere ike ịchọrọ. Maka ọrụ a nke dochie hoses, ị ga-achọ nrịcha oghe 8mm, ịchọrọ igodo Allen 2 na 1 inch / 2mm ma ọ bụ igodo Allen, ịchọrọ igodo 4mm Allen ma ọ bụ igodo Allen, ịchọrọ oghere Shimano na pistin, ịchọrọ mmiri mmiri ịnweta, ihe nkedo, ụdị nhicha ma ọ bụ mmanya isopropyl.
Tupu ịmalite ọrụ gị, ịnwere ike itinye igwe kwụ otu ebe na ebe ọrụ gị, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịnweghị, nwee enyi ka ịnwe ịnyịnya ígwè gị ka ị ghara ịgba ọsọ ya. usoro, ọ nwere ike ghara inwe na gị n'ihu breeki diski. Nke mbụ, m ga-arụ ọrụ na breeki n'ihu ebe a nke dị n'aka nri ka m wee jiri igodo 4 mil Allen naanị mee ka ndị na-agba ọsọ breeki, nke a ga-abụ nke doro anya na usoro ọzọ.
Ọ dị mma, nke mbụ ịkwesịrị iwepụ uwe mkpuchi roba na njedebe nke lever ebe a, nke a bụ naanị mkpuchi Wepu eriri sooks. Ugbu a, mgbe ị dị njikere, nweta gị 8mm oghe-ọgwụgwụ spana na nanị atọghe a sooks njikọ. Site na njikọ sooks unwound, dị nnọọ slide ya azụ na sooks na mgbe gị nzọụkwụ ọzọ bụ n'ezie wepụ sooks si menjuobi.
Mgbe ị na-eme nke a, ọ dị mma ịnwe nguzo siri ike ịtọpụ oliv na-anọdụ na lever. Cheta na enwere ihe di nkpa ida mmiri mmiri ka ị na amịpụta ya, ọ bụghị nke dị mkpa n'oge a, gbalịa kpachara anya ka o kwere mee. N'oge a, ọ dị mkpa ka ị ghara imetụ lever brek.
Ọ bụrụ na ị dọpụta breeki breeki ahụ, ị ​​ga-efufu mmiri na nke ahụ pụtara na ị nwere ọbara ọgbụgba zuru ezu. Isi ihe nke usoro a bụ ndozi ngwa ngwa ma dịkwa mfe. Ya mere, mgbe m n'ihu breeki lever ugbu a ná njikọ si sooks, ikwugharị otu usoro na n'azụ breeki menjuobi.
-esi jiri dropper post
Ugbu a ọ bụ oge iji jikọta eriri ndị ahụ. Ọzọ, kpachara anya ka ị ghara imetụ lere onwe ya aka, ebe ị chọghị ida mmanụ ọ bụla Ala ga-agba ọbara brek. Yabụ na ọ bụ n'ụzọ nkịtị usoro ntụgharị nke na-adọpụta hoses ahụ n'aka ndị ahụ.
Yabụ ị na-ewere eriri igwe breeki gị, slide ya azụ n'ime lever, ịchọrọ ijide n'aka na oliv na-anọdụ n'ụlọ, ị ga-eche na ọ ga-adaba na ebe ọ dị mfe ma nweta njikọta sooks gị, weghachite ya, jide n'aka na ị agafela eri. N'iji eriri 8mm mepere emepe, mechie akwa ma ọ bụrụ na mmanụ dị n'akụkụ ọnụ ya wee tinyeghachi akpụkpọ ụkwụ roba. Ugbu a ọ bụrụ na ị meela ihe niile ziri ezi, ị nwere ike iji teknụzụ azụ azụ gị mee ihe, ọ na-adị mma ma bụrụ nke ọma, dịka ndị a kwesịrị.
Agbanyeghị, anyị ga-ejide n'aka na enweghi ikuku dị na sistemụ ebe a. Anyị na-ewere ọwara a nke bụ ngwa Shimano na-agba ọbara na igodo abụọ na ọkara Allen. Dika i wepuru ihe igwe abuo na nke abuo na en screw kpachara anya nihi na onwere obere o-ring nke ichoghi ida.
N’olulu ahu n’elu olulu na obere mmanu di n’ime ya, ihe mechiri gi gha eghe oghe ka ikuku we puo, ma onwere. Jiri nwayọ apịpụta onye na-agụ ya ihe ugboro ole na ole ma ị ga - ahụ ụfọdụ ikuku na - arị elu. Ọ bụrụ na ị na-eme nke a bụ ezigbo ihe ịrịba ama dị ka ọ pụtara na ị na-na na-arụ ọrụ na-eme breeki lever na-wetara na mkpanaka, na-eji nwayọọ enweta na sooks, ruo n'ezie lever dị nnọọ aka ikuku egosipụta na nwere ike ịbụ na e.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkpachapụ anya na nke a, megharịa usoro a n'ụzọ niile gbadaa USB site na caliper na menjuobi. Otu igwe kwụ otu ebe a nwere mgbọrọgwụ dị n'ime, ọ bụghị n'ezie nhọrọ, ọ bụrụ na ịchọrọ ime nke a na igwe kwụ otu ebe gị na mgbọrọgwụ mpụga, debe lever ahụ n'elu mmanya ahụ, ị ​​nwere ike iji eriri eriri ma ọ bụ eriri mkpịsị ụkwụ mee nke a ma rụọ ọrụ ụzọ gị ruo mkpara nwayọọ. Ugbu a ịkwesịrị itinye ihe nkwụsị ahụ n'ime olulu ahụ naanị iji jide n'aka na ọ dịghị mmanụ na-atasị ebe niile mgbe ị na-ewepu olulu ahụ ma jiri nlezianya wepụ olulu ahụ n'ime ebe ahụ.
shinola anyịnya igwe nyochaa
Ebe ọ bụ na ejighi mmanụ a ọzọ, m ga-eweghachi ya na karama o siri pụta, agbanyeghị, ozugbo ị gbanyechara brekị ahụ, ọ dị mkpa ka ị ghara iji mmanụ ochie ahụ tinyeghachi wiilị na igwe kwụ otu ebe ka ịlele ihe niile na-arụ ọrụ. Tupu ị gụchaa, gbaa mbọ hụ na ihichasị ihe mkpuchi breeki na ebe a na-ejigide ya na ụfọdụ ihe nchacha ma ọ bụ mmanya isopropyl iji jide n'aka na ewepụrụ ihe fọdụrụ na mmanụ, ọ dịkwa ezigbo mkpa iburu n'uche mgbe ị na-eji usoro a na igwe kwụ otu ebe dị elu ijide n'aka na ma gwa onye nwe ya ma ọ bụ mee ka ha laghachi na nkịtị. Ọ dịghị mma ịnwe brek n’akụkụ adịghị mma.
In na ngwụcha echefula iji tọgharịa gị breeki levers ka a họọrọ n'akuku, ọma, o see ụzọ ụkwụ, echefula ịdenye aha, pịa ebe a, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere Shimano brek na-agba mmee, pịa Ebe a. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere Avid na Sram brek, pịa ebe a ma ọ bụrụ na isiokwu ahụ masịrị gị.
Kedu ka ị si edozi SRAM ndu t brake levers?
Jide n'aka na ị afanyekwa naleveroge ole na ole wee gbasaa usoro ikuku (na-agbanye sirinji ala, wee dọghachi azụ wee nweta egosipụta niile). Ozugbo emechara ya, kpoo mpempe akwụkwọ niile azụ wee kpọọ kọntaktị gịimegharilaghachi azụ. Afanyekwa naleversoge ole na ole iji hapụ usoro ahụ.Jenụwarị 8 2018 Nov.
Ndi SRAM ndu ka enwere onu obara?
Gịnwere ikechọtaỌbara ọgbụgbaigba obia n'ọdụ ụgbọ mmiri na niileIhereKoodu,Nduzi, na Ọkwa ụdị breeki kemgbe 2017.June 22. Dec 2019
Usoro SRAM ka mma karịa ndu?
Okwesiri ikwu na nke ohuruIhereG2 bụmma karịambụNduzi. Na azụ azụ ule, anyị hụrụIhereG2 na-enye ma mgbanwe dị nwayọ na ntakịrị mmụba na ngwụcha ngwụcha ngwụcha ngwụcha dị, na-enye anyị ohere ịmetụ obere ma mesịakarịaiheNduzi.Sep 24 2019
Ogologo oge ole ka SRAM ga-eji kwụsị brek?
Ihe agbara gị ga-adịgasị iche dabere na ihu igwe,brakingomume,padụdị, ịnyịnya ịke na teren. Ma gi onwe gikwesịrịna-enweta 500-700miles site na resinpad, na kilomita 1000-1250 site na igwe ọlapad.
Ugboro ole ka ị kwesịrị ị na-agba ọbara breaka SRAM?
Iherena-atụ aro kaigba obaranke gibrekịọ dịkarịa ala otu ugboro n'afọ iji hụ na ezigbobrakingarụmọrụ, ma ọ bụ karịa mgbe ọ bụla ọ dị mkpa.21.11.2019
Kedu ka ị ga-esi wee mechie brek SRAM?
Ihu ọma, ị na-agagafeeihebrekịnabreekimmiri mmiri site na ịpịpụta pistons ahụ tupu ị gbaa ha ọbara. Ọ bụrụ na ị nwere mgbanwe kọntaktị, pịa ya n'ụzọ niile IN. Edozie ihe mgbochi / pistons ahụ n'ime caliper, n'eziokwu ị nwere ike ịkwanye ha n'ihu ma ọ bụrụ na ịchọrọ.08.01.2018
Ndị ndu SRAM enwere ike ịgbanwe?
Naleverkwusi niileIherehoses dabara niileNdị SRAMiji stealth-a-majig barb na oliv. Na caliper njedebe akwa akwa dị iche. Enwere mmebi ebe a. You nwere ike bulieNduzicalipers na sooks na Pinkbike Buy / Ree maka na-esote ihe ọ bụla; onye a ga- efego ruo n'ihu gịlever.02/17/2021
Gịnị na-eme ndu re brake ọma?
Ihe na-eme ka Nduzi RE dị mma bụ nchikota nke piston anọ, nke sitere na breeki Koodu, na ọnụ ala Nduzi dị ọnụ ala. Nke ikpeazụ a nwere mma aluminom, mfe bushing na iru ukpụhọde, na-ekiri site na a alkpọ oku n'ihu menjuobi.
Olee ụdị brek SRAM na-eduzi re breeki eji?
Na ngwụcha mmanya bụ ọkọlọtọ Guide R lever, ebe ngwụcha igwe kwụ otu ebe bụ okpukpu anọ nke breeki breeki si na SRAM na-agba ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ ọsọ. Otu pairing ahụ apụtawokwa na Mgbaaka DH pụrụ iche ma SRAM na-enye ihe yiri nke ahụ XC na-ezute ngwakọ DH n'ụdị nke koodu R breeki ruo ọtụtụ afọ.
Kedu nke kacha mma breeki maka igwe kwụ otu ebe?
Ikekwe breeki anyị kachasị amasị anyị na usoro ahụ, Guide RE’s bụ ezigbo ọnụ ahịa ma na-enyekwa ike ịkwụsị ike, nke mere na a na-agba ha n'ọtụtụ igwe eletrik. SRAM na-ekwu na e mebere ha iji kwado ọsọ ọsọ ọsọ na ojiji siri ike karị nke na-abịa n'ihi ụba ibu nke igwe ele e-bike.